दुई खर्बमा यसरी बन्नेछ उपत्यकामा मेट्रो रेल - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले उपत्यकाका दुई रुटमा चल्ने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बोर्ड बैठकले मेट्रो रेलको रुट नं. १ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–फास्ट ट्र्याक स्टेसन खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) र डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा रेल विभागलाई दिएको छ। रुट नं. २ अन्तर्गत नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डको डिपिआर भने लगानी बोर्ड आफैँले गर्नेछ। दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत बुट प्रणालीमा अघि बढाइनेछ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
बोर्डका अनुसार रुट नं. २ अन्तर्गत नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डसम्मको लम्बाइ ४५ किमि छ। सो खण्ड निर्माण गर्न झन्डै एक खर्ब २९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, रुट नं. १ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–फास्ट ट्र्याक स्टेसनसम्मको लम्बाइ करिब २५ किमि छ। यस खण्डको निर्माण लागत ७५ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। ‘तथ्यांकअनुसार लिक निर्माणको लागत रकम प्रतिकिमि तीन अर्ब रुपैयाँ छ,’ लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारीले भने। अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।
उपत्यकामा बढाइयो सुरक्षा: ६ वटा क्षेत्र जोखिमको सूचीमा, नाकामा बढ्यो निगरानी
काठमाडौं । निर्वाचन विरोधी समूहको सक्रियताका आधारमा प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ […]
होशियार ! निर्वाचनको मुखमा बजारमा नक्कली नोटको यस्तो बिगबिगी
काठमाडौं । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीमा नक्कली नोटको बिगबिगी बढेको छ। विभिन्न बैंक तथा […]